सार्क सक्रिय बनाउने मोदीको प्रस्ताव कति रणनीतिक ? | Kendrabindu Nepal Online News
1431530 82058 1047332 302140
सार्क सक्रिय बनाउने मोदीको प्रस्ताव कति रणनीतिक ?
२ चैत्र २०७६, आईतवार १५:००
कोरोना भाइरसको फैलदो महामारीले विश्वलाई चिन्तित बनाइरहेका छ । यही चिन्ताका वीच यसैसाता भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कोरोना भाइरसको संक्रमणविरुद्ध जुध्न सार्क मुलुकहरुको नेतृत्वले सामुहिक रुपमा प्रभावकारी रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेश गरे ।
पछिल्ला केही वर्ष यता निश्क्रिय जस्तै रहेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रिय सहयोग संगठन, सार्कमाथि भारतका प्रधानमन्त्रीले किन एकाएक चासो देखाए ? सबैलाई आश्चर्य लागेको छ ।
आठ मुलुक सदस्य रहेको यो संगठन सन् २०१४ पछि भारत र पाकिस्तानवीचको राजनीतिक विवादमा उल्झेको छ । ६ वर्षयता सार्कको शिखर सम्मेलन हुन सकेको छैन भने सार्ककै बलियो राष्ट्र भारतले अन्य क्षेत्रिय संगठनहरुलाई महत्व दिंदै आएको छ ।
मोदीको सार्कमाथि बढेको चासो यो क्षेत्रमा कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्नका लागि मात्रै हो की अन्य कुनै रणनीतिक स्वार्थ हो ? वा उनको यो सस्तो प्रचारवाजी पो हो की भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै उठेको छ ।
दुई साता अघि विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई विश्वब्यापी महामारी घोषणा गरेसँगै विश्वभरका अन्य क्षेत्रिय संगठनले यसविरुद्ध लड्न एकजुट हुने प्रतिवद्धता जनाए । रोकथामका लागि त्यस्तो कदम प्रभावकारी हुने देखेपछि भारतले पनि आपतका वेला सार्कलाई सम्झियो ।
यतिसम्म की मोदीले सार्क कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाईमा उदाहरणीय बन्न सक्ने घारणा सार्वजनिक गरेसँगै त्यसलाई अन्य सदस्य राष्ट्रका सरकार प्रमुखले स्वागत गरे । मोदीको यो धारणालाई स्वागत गर्नेमा सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र नेपाल पहिलो स्थानमा थियो ।
मोदीले ट्वीटमार्फत सार्कको नेतृत्वलाई कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाईका लागि बलियो रणनीति तय गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । उनले यो क्षेत्रका नागरिकलाई सुरक्षित राख्न ‘भिडियो कन्फ्रेन्स’ मार्फत सरकार प्रमुखबीच छलफल गर्न सकिने घारणा राखेका थिए ।
यो क्षेत्रमा भारतको चीर प्रतिद्वन्दी मुलुक पाकिस्तानले समेत मोदीको नयाँ प्रस्ताव स्वीकारेपछि सार्क राष्ट्रमा एकाएक नयाँ तरंग छाएको छ । पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले मोदीको प्रस्ताव सकारात्मक रहेको बताउँदै कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्न क्षेत्रिय र विश्वस्तरमा सहयोगको खाँचो रहेको औंल्याएको छ ।
तनावपूर्ण सम्बन्धबाट गुज्रिरहेको भारत–पाकिस्तानबीच पहिलो पटक कुनैपनि किसिमको संवादका लागि सहमति बनेको छ ।
खुल्ला त सार्कको ढोका ?
सन् २०१४ यता सार्कको शिखर सम्मेलन आयोजना हुन सकेको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अध्यक्षतामा नेपालले काठमाडौंमा १८ औं शिखर सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । उक्त सम्मेलनले दुई वर्षपछि पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावादमा १९ औं शिखर सम्मेलन गरिने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । तर, ६ वर्ष बितिसक्दा समेत ‘इस्लामावाद शिखर सम्मेलन’ अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।
सार्कको सबैभन्दा प्रभावशाली मुलुक भारतले पाकिस्तानलाई एक्ल्याउने उद्देश्यले इस्लामावाद सम्मेलनमा रुची नराखेको विश्लेषण गरिँदै आइएको छ । त्यसैले यो वीचमा भारत सार्कमा भन्दा अन्य क्षेत्रिय संगठनको विस्तारमा लागेको छ । यसले सार्कको झण्डै साढे तीन दशक लामो इतिहास मेटिने त होइन भन्ने शंका जन्माएको छ ।
भारतले सन् २०१५ मा भुटान, बगंलादेश, भारत र नेपाललाई सदस्य राष्ट्र बनाउँदै ‘बीबीआईएन’ संगठनको अवधारणा अघि सारेको थियो । त्यसपछि भारतको रोजाइमा अर्को क्षेत्रिय संगठन ‘बिम्स्टेक’ पर्यो ।
‘बहुक्षेत्रिय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास’ नाम दिइएको ‘बिम्स्टेक’ सार्कलाई प्रतिस्थापन गर्न भारतले ल्याएको नयाँ अवधारणाका रुपमा धेरैले बुझे । ‘बिम्स्टेक’मा भारतसँगै, बंगलादेश, नेपाल, भूटान, थाइल्याण्ड, म्यानमार र श्रीलंका छन् ।
बीबीआईएन र बिम्स्टेक दुबै क्षेत्रिय संगठन भारतको अगुवाईमा स्थापना हुनु र ती दुबै संगठनमा पाकिस्तानलाई नसमेटिनु उसलाई एक्ल्याउने भारतीय नीति रहेको बुझ्न धेरै गाह्रो छैन । सार्कलाई छोडेर भारतले बीबीआईएन र बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रबीच छलफल निरन्तर अगाडि बढाउँदै लगेको छ ।
तर, यसै साता मोदीकै अगुवाईमा भाइरसले आक्रान्त पारिरहेको कठिन समयमा सार्कलाई सम्झनु दिल्लीको इच्छा मात्र नभएर आवश्यकता पनि भएको बुझ्न जरुरी छ । त्यसो त विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै दक्षिण एशियाली मुलुकहरु विश्वमा सबैभन्दा असंवेदनशील र असुरक्षित रहेको भन्दै ‘रेडजोन’ मा राखेपछि भारतको सक्रियता बढेको हो ।
दक्षिण एशियामा मात्रै विश्वको एक तिहाई जनसंख्या बस्छ । भाइरसले यो क्षेत्रलाई गाँजेको खण्डमा त्यसको प्रत्यक्ष हानी भारतलाई पर्नेछ । र, निरन्तर आरालो लाग्दै गइरहेको उसको अर्थतन्त्रलाई असर पर्नेछ । सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या र अर्थतन्त्र भएको मुलुकका आधारमा त्यसको सबैभन्दा ठूलो क्षति पनि उसैले बेहोर्ने छ ।
यी सबैकुरा राम्रोसँग बुझेका मोदीले अप्ठ्यारो समयमा दक्षिण एशियाली क्षेत्रिय सहयोग संगठन सार्कलाई सक्रिय बनाउन खोज्नुलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ । तर, भारतको यो नयाँ थालनी क्षणिक मात्र नभइ दीर्घकालीन भए यसको पुरा फाइदा दक्षिण एसियालाई नै पुग्ने निश्चित छ ।
त्यसैले दीर्घकालीन अवधारणासहितका योजना अघि ल्याउदै अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतले नेपालले पनि सार्कलाई चलायमान क्षेत्रिय संगठन बनाउन रचानात्मक भूमिका खेल्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।
कति रणनीतिक ?, मोदीको प्रस्ताव, सार्क सक्रिय
Prevअब बसभित्रै पनि रक्तदान गर्न सकिने
नागरिक लगानी कोषले नयाँ वर्षदेखि स्टक डिलर संचालन गर्नेNext
कोभिड-१९ विरुद्धको प्रतिकार्यका लागि विश्व बैंकको तीन अर्ब बढी सहयोग
ललितपुर महानगरपालिकाले बिहिबारदेखि राहत बाड्ने
चीनसँग खरिद गरिएका स्वास्थ्य सामाग्री सम्बन्धी स्वेतपत्र जारी गर्न राप्रपाको माग
‘चैत्र २६ लाई दीनदुःखीको सहयोग गर्दै प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना दिवस मनाउँ’ : काँग्रेस नेता जोशी
'चैत्र २६ लाई दीनदुःखीको सहयोग गर्दै प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना दिवस मनाउँ' : काँग्रेस नेता जोशी
नयाँ वर्षदेखि बैंकहरुको ब्याजदर घट्दै (भिडियोसहित)
लकडाउनको मारमा पोल्ट्री व्यावसायी (भिडियोसहित)
लकडाउन कार्यान्वयन गर्न कतै गोली प्रहार कतै भारी जरिवाना (भिडियोसहित)
राहतको लाइनमा हुँदा खाने भन्दा बढी हुने खानेहरू (भिडियोसहित)